'Kampaanonni Itoophiyaa keessa jiran hojjettootasaanii miidhaa jiru' - BBC News Afaan Oromoo
Hojjattuu paarkii indastriyaalaa 'Eastern' keessaa -suuraa 2017tti kaafame
Itoophiyaa keessatti kubaaniyyaawwan alaa biyyoota addunyaa garaagaraarraa seenuun hojii investimentiirratti bobba'anii jiran mirga lammiilee, eegumsa naannoofi kan hojjettootasaanii ilaalcha keessa hin galchan jedhamuun ni komatamu.
Tibbanammoo hojjettoonni Paarkii Indastirii Hawaasaa miidhaan irra ga'uun himamaa jira.
Dhaabbati oomishoota faashinii adda addaatiin beekamu PVH dameesaa Itoophiyaa keessaa qabu keessatti hojjettoota qacaree qabu ni arrabsa, miidhaas irraan ga'a, akkasumallee sa'atiittii santimii Ameerkaa 12 qofa kaffala isa jedhamurratti gaaffii Rooyitarsi Hogganaa Kubbaaniyyichaaf dhiyeessee tureen dhaabbati shaanii dhimma kanarratti qorannoo akka geggeessu ibsanii turan.
Kubbaaniyyaan PVH jedhamu kun kubbaaniyyaawwan biroo kanneen akka Toomii Hiilfiigar fi Kaalviin Kileenfaa of jalaa qaba.
PVH damee Itoophiyaatiif, kubbaaniyyaa galteewwan dhiyeessu keessa kan hojjetan hojjettoota Itoophiyaarra hacuuccaan ga'eera kan jedhu dhaabbati mirga hojjettootaaf falmu 'Worker Rights Consortium' jedhamu kan Ameerkaatti argamu saaxileera.
Dhaabbati 'Worker Rights Consortium' maal adda baase?
Dhaabbati 'Worker Rights Consortium' jedhamu dhaabbata walabaa yoo ta'u kubbaaniyyaawwan addunyaarra jiran keessatti akkaataa qabiinsa hojjettootaafi haalota bakka hojii jiran hundumaa kan qoratee ifoomsuudha.
Akka dhaabbati kun jedhutti kubbaaniyyaan PVH hojjettoota kubbaaniyyaa galtee isaaf dhiyeessu keessa hojjetan kaffaltii dabalataa malee sa'atii dabalataa hojjisiisa akkasumallee bakka hojiitti bishaan yoo dhugan mindaa isaaniirraa kuta.
Bu'aan qorannoo dhaabbata 'Worker Rights Consortium' akka mul'isutti hooggantoonni kubbaaniyyaa PVH wayita hojjettoota shamarranii qaxaran garaatti baachuu fi dhiisuu isaanii garaa isaaniirra harka kaa'uun mirkaneessuuf ni yaalu.
Madda suuraa, Addis Fortune
Komii Hojjettoota Paarkii Indastiriyaala Hawaasaa
Hojjettoota Paarkii Indastirii Hawaasaa keessa jiran irra miidhaan ga'eera oduu jedhu kana mirkaneessuuf BBCn hojjettoota paarkichaa lama dubbiseera. Shamarreen maqaanshee dhahamuu hin feene tokko paarkii Indastirii Hawaasaa keessaa warshaa huccuu omishu tokko keessa hojjechuu dubbatti.
ALI bara 2009 Yuniversitii irraa kan eebbifamte shamarreen kun hanga yuuniversitiitti dhufanii gaaffii fi deebii waliin gochuun akka warshaa kanatti qacaramte dubbatti.
''Nama garaatti baatu qofa osoo hin taane harmootiidhuma hin barbaadan. Hojiitti qacaramuuf jecha wayita qormaataa utuu daa'ima qabanii hin qabu jedhanii kan galan jiru.'' jechuudhaan hacuucaa dubartoota ulfaa fi harmootii irra ga'u dubbatti.
Hooggantooni dhiyoollee ''haalli hojii isaa namoota garaa baatanii fi harmootii ijoollee qabaniif hin mijatu'' deebii jedhu nuuf deebisu jechuun dubbatti shamarreen kun.
Daawwannaan MM Awurooppaatti taasisan gama diinagdeedhaan hiika maal qaba?
Dargaggeessi paarkii Indastirii Hawaasaa keessa hojjetu kan biraan nuti dubbisne mindaan isaan argatan magaalaa hawaasaa keessatti mana kiraa fi nyaata danda'ee isaan jiraachisuu waan hin dandeenyeef tuutaan walitti gurmaa'anii baasii qooddachaa akka jiraatan dubbata.
Sa'atii 24 keessatti faraqaan sa'atii saddeetiin si'a sadiif kan jiru ta'uu kan dubbatu dargaggeessi kun faraqaa halakanii daballii birrii 10 qofaan dirqamsiifamanii akka hojjetan dubbata.
Bu'aan qorannoo 'Woker Rights Concortium' erga ifa ta'ee booda dubbi himaan kubbaaniyyaa PVH gaaffiifi deebii Rooyitarsi waliin taasisaniin sarbama mirgaa kubbaaniyyaa isaanii keessatti raawwatu kamiiniyyuu adda baasanii tarkaanfii fudhachuuf hatattamaan qorannoo akka geggeessan ibsan.
Sarbama mirgaa hojjettootarra ga'e yoo jiraate tarkaanfii barbaachisaa fudhachuun ni sirreessina jechuun Wiixata darbe galgala dubbatanii turan.
Hoggantuun Korporeeshinii Paarkiiwwan Indaustirii Itoophiyaa Lalisee Namee dhimma kanarratti gaafannee turre. Isaan garuu manni hojii isaanii dhimma paarkiiwwan Indastirii fi misoomaawwan bu'uuraa irratti kan xiyyeeffatu ta'uu eeruun dhimma mirga hojjettootaa akka isaan hin ilaallanne dubbataniiru.
Daayirekatarri Sabquunnamtii Komishinii Investimantii Itoophiyaa Obbo Makonnin Haaylee gama isaaniitiin hojjettoonni paarkii Indastirii Hawaasaa keessaa hojjetan mirgi isaanii sarbameera oduun jedhu dhugaarraa kan fagaateedha jedhan.
Paarkiin Indastirii Hawaasaa banamuunsaa jiraattotaaf keessattuu dargaggoota magaalattiif carraa guddaa uumeera kan jedhan Obbo Makonnin paarkicha keessatti baayyinaan qacaramanii kan hojjetan dubartootaa fi dargaggoota jedhan. Dbartoota garaatti baatanii fi shamarran irratti hacuuccaan ni geggeeffama kan jedhu dhara ta'uu dubbatan.
Hojjettootaaf mindaa isaanii irratti dabalataan tajaajjilli geejjibaa fi nyaataa bilisaan kennamaaf kan jedhan Obbo Makannin gabaasi 'Worker Rights Consortium' dhugaa jiru kan agarsiise miti jedhan.
Itoophiyaan ka'umsa kaffaltii miindaa isa xiqqaa murteessitee hinqabdu
Manneen hojii Dhimmoota Hojjetaa fi Hawaasummaa Federaalaa fi Ummattoota Kibbaarraa dhimma kana qulqulleeffachuuf yaaliin taasifne sababa isaan argamuu hin dandeenyeef hin milkoofne.
Dhimma kanarratti Federeeshinii hojjettootaa gaafachuuf yaallus isaanis waan argamuu hin dandeenyeef hin milkoofne.
Rooyitarsis gabaasa hojjeterratti yaada mootummaa Itoophiyaa itti dabaluuf carraaqqiin inni Waajjira Ministira Muummee fi Dhaabbilee Hojjetaa fi Hawaasummaa quunnamuuf taasise utuu hin milkaa'in akka hafe ibseera.
Kubbaaniyaawaan addunyaa hedduun carraawwan akka humna namaa gatii madaalawaa, galteewwan indastirii fi kaffaltii gibiraa ilaalcha keessa galchuun fuulasaanii gara Afriikaatti deebisaniiru. Itoophiyaanis carraawwan investimentiif ta'an dhiyeessuun investeroota gara biyyaa galchuuf ni tattaafatti.
Huccuuwwan moofaa hedduun dhumni isaanii eessaa?
Itoophiyaan ka'umsa kaffaltii miindaa isa xiqqaa murteessitee qabaachuu baattus hojimaata mirga hojjettootaaf falmu garuu qabdi.
Kubbaaniyyaan PVH kubbaaniyyaawwan faashiniiwwan uffataa oomishuun addunyaarratti beekaman keessaa tokko yoo ta'u hojjettootasaa miiliyoona tokkotti siqaniin bara faranjootaa dabarsine kana keessa qofa galii doolaara miiliyoona 9.7 argachuu danda'eera.
Itiyoophiyaa: Osoo biyya keessaa hir'inni jiruu bakkeetti erguun maaliif?
Viidiyoo, 'Homaa irraa hin fayyadamne'
Haleellaan qilleensaa Maqaleetti raawwateen dubartii ulfa dabalatee namootni saddeet miidhaman